Faroole: Kismaayo waxaan kusoo dhisi doonaa Dowladda Cusub - Awdinle Online
Faroole: Kismaayo waxaan kusoo dhisi doonaa Dowladda Cusub
Senator Caburaxmaan Xaaji Maxamuud Faroole oo ka tirsan wakiiladda aqalka sare ee dowladda federalka soomaaliya ayaa maanta warbaahinta u sheegey arin cusub oo dad badan oo soomaaliyeed la yaab ku noqotay.
Senator Farool oo ka mid ahaa wafuudii maanta ku sii qulquleysey magaalada kismaayo si ay uga qeyb galaan caleemo saarka madaxweynaha maamul gobaleedka jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa si cad u sheegey in dowladda hada jirta aan lagu sii fiirsan karin in ay dalka sii maamusho.
Senator Cabduraxmaan Faroole ayaa yiri ” dowladda hada jirta waxaa ay colaadisay dadkii soomaaliyeed oo dhan, sida maamulka gobaleedyada, siyaasiyiinta Ganacsatad, iyo dadka ka fekerka duwan oo dhan. Sidaas darteed kismaayo kama soo tegi doono anagoo dowlad kale u soo dhisin soomaaliya.
Hadalka C/raxmaan Faroole ayaa imaanaya xili ay dowlada federalka dagaal balaaran kula jirto siuaasiyiinta dalka iyo maamul gobaleedyada dalka ka jira.
Previous articleYaa ka dambeyay in madaxdii hore ee dalka kismaayo tagaan .
Next articleFiqi: Reer Kismaayo dhulka inuu ku socdo waa u diideen Xaaji Muuse Suudi Yalaxow